Fitsarana : manambana hitokona ny mpirakidraharaha | NewsMada
Toy ny hatramin’izay ihany… Fitakiana tambin-karama no antony mety mbola hanaovan’ny mpirakidraharaha eo anivon’ny fitsarana fitokonambe indray ato ho ato. Tsy mbola misy ny fandoavana ny tambin-karama andiany faharoa ho azy ireo, efa nampanantenaina.
“Misy ny fitantanana tsy mazava eto anivon’ny fitsarana ankapobeny”, hoy ny sekretera jeneralin’ny Sendikàn’ny mpirakidraharaha eto Madagasikara, Randriamaro Alain Michel, teny Anosy, omaly. Misy hatrany ny mizana tsindrina ila eo amin’ny fitantanana ny samy mpiasan’ny fitsarana. Ny hoe minisiteran’ny Fitsarana: mpitsara, mpandraharaha ny fonja, ary mpirakidraharaha.
Noho izany, tokony hitovy ny fitantanana ny zo ananana, araka ny fanazavany. Tokony hitovy, ohatra, ny fitantanana raha olona samy marary, manana fianakaviana maty. Fa tsy azo lavina am-bava fotsiny ny marary sasany fa hoe tsy misy vola ny fanjakana. Tsy mitovy fa misy elanelana be ny vola fanampiana amin’izany.
Efa nisy ny dingana nataon’ny sendikà eo anivon’ny fitsarana: fihaonana tamin’ny minisitera mpiahy tamin’ity herinandro ity. Andrasana amin’ity herinandro ity ihany ny ho valiny. Hodinihina amin’ny fivoriamben’ny mpirakidraharaha izany amin’ny herinandro ambony. Rehefa tsy misy ny fandaminana, hiroso amin’ny fitokonambe ireo mpirakidraharaha.